Equipmentlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ Ọgwụ | Ndị na-emepụta ngwa ngwa ọgwụ na China
Manual Door Wasgba washer
Rapid-M-320 bụ akwụkwọ ntuziaka ụzọ akụ na ụba nke na-eme nchọpụta ma mepụtara dịka iwu nke ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ pere mpe. Ọrụ ya na ịsa ahụ nke ọma dị ka Rapid-A-520. Enwekwara ike iji ya maka disinfection nke arịa ịwa ahụ, ngwongwo, trays ọgwụ na efere, ọgwụ anesthesia na hoses corrugated na ụlọ ọgwụ CSSD ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Ndị na-ehichapụ nsogbu na-adịghị mma
SHINVA Sistemụ nlekota oru maka ọkụcha ọkụ
■ testingsacha usoro nnwale
Usu agụụ saa dị iche iche si ịgba saa, ọ adopts ọhụrụ ọrụ ụkpụrụ dozie nile di iche iche nke mgbagwoju ngwá featuring ọzọ uzo, gia na lumen. Iji nwekwuo nkwado sayensị banyere nsacha ahụ, SHINVA na-ewebata ihe nlebara anya nhichapụ nyocha dịka atụmatụ ahụ si dị:
Ogologo nke onye na-ekpofu ahịhịa bụ naanị 1200mm nke na-enye ntinye ntinye dị mfe ma dịkarịsịrị nta na-ebelata mmefu na oge nrụnye.
Wasgbọ mmiri Cart
DXQ usoro multifunction ogbe washer-disinfector na-pụrụ iche maka lager ihe n'ụlọ ọgwụ dị ka ọrịa bed, ụgbọ ibu na ogbe, akpa wdg Ọ nwere uru nke nnukwu ikike, nke ọma ihicha na elu-ogo akpaaka. Ọ nwere ike mezue dum usoro gụnyere ịsa, itucha, disinfecting, ihicha wdg
DXQ usoro multifunction ogbe washer-disinfector ike ga-eji na ahụ ike na ahụ ike na ubi ma ọ bụ anụmanụ laabu ịsa na disinfect na ihe ndị kwesịrị ekwesị gụnyere ụdị ọ bụla nke trolley, plastic nkata, sterilizing akpa na ya mkpuchi, ịwa ahụ table na ịwa ahụ akpụkpọ ụkwụ, anụmanụ laabu ngịga, wdg.
Free Dịwara Ultrasonic Cleaners
QX usoro ultrasonic washer dị mkpa igwe igwe na CSSD, ime ụlọ na laabu.SHINVA na-enye ihe ntinye ihe mkpochapu ultrasonic, tinyere nke mbido mbụ, ịsacha nke abụọ na ịsacha miri dị iche iche.
Isiokwu Top Ultrasonic Washers
Obere ihe na-ekpocha ọkụ nke ultrasonic na-eji akara ngosi oscillation dị elu, nke zipụrụ site na ultrasonic generator, na-agbanwe ntụgharị dị elu nke usoro oscillation na-agbasa na ultrasonic ọkara-nhicha ihe ngwọta. Na ultrasonic na-agbasa n’iru na ihe nhicha na-emepụta ọtụtụ nde obere egosipụta. A na-emepụta egosipụta ndị ahụ na mpaghara nrụgide na-adịghị mma nke nnyefe ultrasonic na-ebufe ngwa ngwa na-agbanye ngwa ngwa na mpaghara nrụgide dị mma. Usoro a akpọrọ 'Cavitation'. N'oge a na-egosipụta afụ ahụ, a na-emepụta nrụgide dị elu ozugbo ma na-emetụta isiokwu ndị ahụ iji mee ka ihe na-adịghị mma na-agbaso n'elu na oghere nke isiokwu iji mezuo nzube nhicha.
Iji hụ na nwoke ịga ụlọ ọgwụ mmetụta, ọ dị ezigbo mkpa ka ndị igba ogwu ihe ihicha. YGZ ọgwụ ihicha kabinet na-mepụtara izute n'ezie ihicha mkpa maka dị iche iche ihe n'ụlọ ọgwụ. Ngwaahịa ndị ahụ mara mma n’ọdịdị, zuru ezu na ọrụ, dị mfe na ọrụ. A na-eji ha eme ihe n'ụlọ ọgwụ CSSD, ụlọ ịwa ahụ na ngalaba ndị ọzọ.
YGZ-1600, YGZ-2000 usoro
Njirimara Ngwaahịa nke Center-HGZ
■ 5.7-anụ ọhịa agba akara njikwa ihuenyo.
■ Chamber ihe na-akpụ, mfe dị ọcha na-enweghị nje bacteria.
Door Ọnụ ụzọ iko dị jụụ, dị mfe iji hụ ọnọdụ dị n'ime ime.
■ Smart mkpọchi akpa mkpọchi, nchebe na a pụrụ ịdabere na ya.
System Rotary nghọta nchekwa usoro endoscopes.
Anọ n'ígwé ọnọdụ arịlịka usoro, niile na-echebe endoscopes.
■ Onye na-enwu ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, nchebe na ntụkwasị obi, enweghị ọkụ na-emepụta.
Ihicha na nchekwa nke endoscope bụ ihe dị mkpa. akụkụ nke endoscope ịsa ahụ na usoro disinfection, nke metụtara endoscope na nchekwa ndidi.
123456 Osote> >> Peeji 1/12